Codsiyada Best of Mirroring Your Screen Android | Codsiga Mirror, Mirror Android
Talinayo Codsiyada Best of Mirroring Your Android Screen
Baahida loo qabo dadka isticmaala android si aad u eegto, abaabulo oo loo soo diro labada files warbaahinta ama macluumaad Windows XP u dhexeeya qalabka android iyo qalab kale oo u wadin inuu soo mirroring codsiga. Mirroring codsiyada waa codsiyada isku xira andriod qalabka kale. Marka laga reebo tayada qaybsiga waxa ay leedahay, dadka isticmaala waxay awoodi karaan inay buugii shaashadda isaga / iyada phone andriod on Kombiyuutaro Personal / Mac / Linux midkood, ama qalabka sida Smart TV, i-gashto. Mid ka mid ah tayada qaar ka mid ah codsiyada waxay tahay in loo isticmaali karo kooxaha da'da kala duwan iyo tani waa sababta oo ah qaababka ay sharciyeed ah. Kuwani muuqaalada sharciyeed ah ka dhigaysa in ay u fiican tahay waxbarashada iyo ujeedooyin waalidka.
1. il Screen mirroring
5. Midaysan Remote
Waxaa intaa dheer, mirroring codsiyada la shaqsi ama koox dad ah oo ka mid ah u bandhig ganacsiga iyo waxbarashada ama ujeedooyin ay ciyaareyso ay isticmaali karo. Codsiga Mirroring sidoo kale noqon kartaa bilaash ah ama lacag leh, si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah oo lacag la'aan ah ku bixisay versions buuxa oo ay jiraan helitaanka aan xad lahayn in muuqaalada ay ka buuxaan codsiyada kuwa.
Sidoo kale, codsiyada waxay leeyihiin interface luqado badan oou ay isticmaalka fudud ee muwaadiniinta kala duwan.
Screen mirroring durduri
Link : https://play.google.com/store/app/details?id=com.mobzapp.screenstream
1. Waa codsiga awood leh in buugii karo iyo aad ugu qortid shaashadda android iyo maqal ah in waqtiga dhabta ah.
2. Waxaad wadaagi karaan shaashada ku nool sida screen dual in qalab ama PC wax ku shabakad isku dhex ciyaaryahan warbaahinta, web browser, Chromecast, iyo qalabka UPnP / DLNA (Smart TV ama aaladaha kale ee compactible).
3. Waxaad samayn kartaa bandhigyada shaqo, waxbarasho ama ciyaaraha awood leh.
4. Waxa kale oo aad baahin karo in lagu internet servers geeyo oo caan ah. DIIDAYA balwad 1. Version Updated ee ROM waxaa mar kasta lagu talinayaa, waayo, ROM kale (CyanogenMod, AOKP) ma siin karaan natiijo fiican. 2. Ka hor inta aan andriod 5.0, qalabka unrooted u baahan doonaa downloads dheeraad ah 3. Waxaa laga yaabaa inay qaadato waqti yar u dhigay ilaa QIIMO : Free iyo Paid- $5.40
Codsigan buugii karaa in PC, TV Smart
Link : https://play.google.com/store/app/details?id=com.pushbullet.android
1. Waa ka badan boosaska badan ka badan codsiyada kale file sharing
2. Waa arrin aad u wanaagsan u riixaya fariimaha ama macluumaad
3. Waxaa kale oo badan si ka dhaqso badan DropBox ama e-mail
4. waa cajiib u fiican la wadaago sawiro iyo qoraal u dhexeeya qalabka.
5. Pushbullet wax fudud in aad hesho links ka computer gal telefoonada aad. DIIDAYA balwad 1. Waxaa ma ogola in xisaab badan 2. Pushbullet uu leeyahay qaab lahayn in aad ku darto faahfaahin saaxiib 3. Arrinta sii daayey markii mirroring waxaa u suurta QIIMO : Free
Link : https://paly.google.com/store/apps/details?id=com.cloudrift.howloudpro
1. Waxaa loo isticmaali karaa si ay ula socdaan heerka mugga by isticmaalka falgal muuqaal ah.
2. Waxaa loo isticmaali karaa kooxaha da'da kala duwan.
3. Waa arrin aad u wanaagsan macalimiinta iyo Waalidiinta carruurta yar yar. Howloud waxaa loogu tala galay in la isticmaalo iyadoo da'da 3 iyo wixii ka sareeya.
4. Waxaa la shaqsi ama koox dad ah oo loo isticmaali karo.
5. Howloud ayaa screen mirroring compactibility miracast. DIIDAYA balwad 1. Codsiga waxay u baahan android 2.2 iyo wax ka sareeya. Waxa aan diyaar u ah version hoose ee OS andriod. 2. Tani codsiga muraayad version PRO oo dhan qaababka loo baahan yahay ma aha lacag la'aan. QIIMO : Free
Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=de.semture.cubetto
1. Cubetto isku daraa taasoo keentay heerarka Tusaale ka mid ah aalad: BPMN, silsilado Event-driven habka (EPC) loo yaqaan ka Architecture ee Systems Integrated macluumaadka (Aris), Bbc-socodka, gooldhalinta urureed, khariidado Mind, Middoobey ee lagula socdo Language (UML), iyo ka duuli gooldhalinta .
2. Waxay leedahay Ingiriisi, Jarmal, Faransiis, Ruush, Isbaanish, interface Shiinaha.
3. Waxaa loo isticmaali karaa si ay u abuuraan caadadii sifooyinkii nooca shay kasta.
4. Waxay leedahay saaxir socodka habka lagula socdo dhakhso ah. DIIDAYA balwad 1. Codsiga waa qaali marka loo eego codsiyada kale oo lacag la'aan ah oo ay bixisay mirroring. 2. Waa codsi la muuqaalada adag oo laga yaabo inay qaataan waqti ay ku adkaadaan. QIIMO : $21.73
Link : http://itunes.apple.com/us/app/unified-remote/id825534179?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
1. Codsiga Midaysan Remote iyo server waa bilaash oo u fudud in ay soo bixi.
2. Waxaa karti leh ilaalinta iyo sirta server password sida ammaanka ah oo ku daray.
3. Server iyo codsiga waa fududahay in kor.
4. Codsiga Midaysan Remote iftiin iyo mawduucyada madow midabka oou soo jiidasho iyo yaabaa by user. DIIDAYA balwad 1. Waxa kaliya ee ka shaqeeya inta u dhaxaysa qalabka macruufka iyo PC ama Mac / Linux in Beta. 2. Waxaa jira in badan oo remotes in version buuxa oo uu ku qaato waqti ayeyna, 3. Qaar ka mid ah remotes yihiin oo kaliya diyaar u gaar ah hawlgalka nidaamka QIIMO : Free iyo Paid- $3.99
Codsiga buugii karaa Personal Kombiyuutaro, Mac, Linux
Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roku.remote
1. Waxa uu isticmaalaa jawaab saaxiibtinimo ka nugul yahay midka fog Xararad asalka ah.
2. Waa weyn si ay u isticmaalaan in maqnaanshaha fog.
3. Waxay leedahay gaar ahaan fursad weyn geeyo keyboard buuxda baaritaanka.
4. Roku waxay muraayad sawirada iyo music ka qalab andriod aad. DIIDAYA balwad 1. Codsiga waxay u baahan ciyaaryahankii ROKU ama TV ROKU. 2. ROKU Search waa la heli karaa oo keliya marka aad ku xiran Roku ciyaaryahan ama Roku TV taageertaa this shaqeynayaan. QIIMO : Free
Codsigan buugii karaa in TV shaashad Wide taageera ROKU warbaahinta ciyaaryahan, TV ROKU.
> Resource > Android > Codsiyada Best Mirror Your Android Screen